स्वास्थ्य – Namaste Host
संसार यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त छ । यो जटिल अवस्थामा बेलायतमा अर्को एउटा नयाँ भाइरस भेटिएको छ । भाइरसको नाम हो मंकीपक्स । बेलायतको नर्थ वेल्समा एकै परिवारका दुई सदस्यमा मंकीपक्सको पुष्टि भएको छ ।अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारणमा यसको जोखिमको खतरा कम छ । स्वास्थ्य अधिकारीले यो भाइरस विदेशबाट बेलायत भित्रिएको पनि दाबी गरेका छन् […]
June 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on अल्सर बिग्रिए घातक हुनसक्छ, थाहा पाइराख्नुस अल्सरका सात लक्षण र बच्ने उपाय
पेटमा अल्सर हुनु मात्र दुखाई मात्रै होइन, निकै खतरनाकसमेत सावित हुन सक्दछ । यो समस्या थाहा पाउने बित्तिकै यसको उपचार सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ । अन्यथा यसले आन्द्राको क्यान्सर पनि जन्माउन सक्छ । पेटको अल्सर अर्थात पेटमा हुने छाला वा यस्तो घाउ जुन फोका बनेपछि हुन्छ । यसप्रकारको समस्या अक्सर खानपानमा गलत परिवर्तनका कारण उत्पन्न […]
June 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु !
एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु ! लसुन हामीले भान्सामा दैनिक प्रयोग चिज हो । यसलाई हामी तरकारी र दालमा बडी मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्ने गर्दछौं । लसुन हाम्रो खानाको स्वाद बढाउन मात्र नभई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक हुनेगर्छ । लसुनलाई प्राचिनकाल देखि नै विभिन्न औषधिको रुपमा […]
अधिकांश मानिसले आफ्नो अनुहार सफा गर्नका लागि साबुन या फेसवासको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।तर यी रसायन मिस्रित फेसवास या साबुनले मुख धूनाले यसले छालामा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। जसले त्वचालाई रुखो बनाउछ। यसको अत्यधिक उपयोग गर्नाले उमेर नै नपुगी छाला चाउरिने समस्या देखिन्छ। साबुन र फेसवासमा अत्यधिक मात्रामा रासायनिक तत्व हुने भएकाले यसले छालाको तेललाई […]
June 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सजिलोसँग जोगाउन सकिन्छ मुटु, गर्नुहोस् यी पाँच काम ।
स्वास्थ्य : मुटु शरीरको यस्तो अंग हो जसलाई स्वस्थ राख्न नसक्दा मानीसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनपुग्छ थाहा नै हुँदैन । बाहिर स्फूर्त देखिने व्यक्ति पनि मुटु अस्वस्थय भएकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन् । जसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानपिनको आवश्यकता हुन्छ, त्यसरी नै शारीरिक व्यायामको पनि आवश्यकता पर्छ । दिनभरमा यस्ता शारीरिक व्यायाम तथा […]
June 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनका लागी अचुक औषधिकाे काम गर्छ डल्ले खुर्सानीले, यस्ता छन् अचुक फाइदाहरु
एजेन्सी । डल्ले खुर्सानी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरको भान्सामा हुने गर्दछ । खुर्सानि सानो बोटमा फल्ने गर्दछ । यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने फाइदा यसप्रकार छन् । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं […]
June 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on महिला जवानले र’गत दिएर बचाइन् सुत्केरीको ज्या’न
को’रोना सं’क्र’मणको दोश्रो लहरको कारण ब्लड बैंक जनकपुरधाममा र’गतको अ’भाव भएको बेला नेपाली से’नाका एक महिला सै’निक जवानले रगत दिएर एक जना सु’त्केरी महिलाको जीवन र’क्षा गरेकी छन्।सर्लाहीको ब्र’ह्मपुरी गाउँपालिका वडा नंं २ बस्ने रिना देवी गुप्ता सु’त्केरी हुने क्रममा शरीरबाट अ’त्यधिक र’क्तश्रा’व भई ग’म्भीर अवस्थामा श्रीराम अस्पतालमा उप`चारा`र्थ थिइन्। उनको परिवारजनले र’गत नपाएर नि’रास […]
June 8, 2021 June 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेटियो, डेल्टा भेरियन्टजस्तै खतरनाक
भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा आउनै लागेको आशाबीच पुनः एक डरलाग्दो खबर आएको छ । पुणेको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजी (एनआइभी) ले कोरोनाभाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङमा नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार यो भेरियन्ट बेलायत र ब्राजिलबाट भारतमा आएका व्यक्तिहरुमा पाइएको हो । इन्स्टिच्युटले यसलाई B.1.1.28.2 नाम दिएको छ । यो भारतमा पाइएको […]
June 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जन्डिस, पत्थरी र क्यान्सर जस्ता घा`तक राेगका लागि अचुक औषधीकाे काम गर्छ पाकेको मेवाले, यस्ताे छ तरिका (भिडियाे हेर्नुस्)
जन्डिस, पत्थरी र क्यान्सर जस्ता घा`तक राेगका लागि अचुक औषधीकाे काम गर्छ पाकेको मेवाले, यस्ताे छ तरिका (भिडियाे हेर्नुस्) । विभिन्न किसिमको पोषक तत्वले भरिपूर्ण मेवाको सेवन विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट आराम दिन निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा भिटामिन सी को भण्डार हुन्छ । यसलाई काँचो वा पाकेको दुवै किसिमको रूपमा खान सकिन्छ । कोलेस्ट्रोल कम […]
June 8, 2021 June 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on मो’टोपनले डि’प्रे’सनमा पुगेकी मास्टर्नी, यसरी घ’टाईन २५ किलो तौल । (भिडियो सहित)
करिब २०० वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेसकेकी अनिता केही समयअघि मोडलिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम थियो ।अनिता अहिले पनि कलाकारितामा नै सक्रिय छन् तर भूमिका भने फेरिएको छ। मोडलिङमा रुचाइएकी अनिताले अहिले हाँस्यव्यंग्यलाई रोजेकी छन्। सर्वाधिक चर्चामा रहेको हाँस्य टेलिशृंखला ‘मेरी मास्सै’ मा मास्टर्नीको भुमिका निकै चर्चित छ। उनै मास्टर्नीको भुमिका निर्बाह गर्ने पात्र हुन् अनिता […]